Ijaarsa biyyaa cimaaf ga'een dargaggootaa murteessaadha
Biyyi tokko karoora guddinaa baafatte fiixaan baasuu kan dandeessu yoo hirmaannaan lammiilee qixa hundaan jiraatedha. Kutaaleen hawaasaa daa'imman irraa kaasee hanga maanguddootaatti ga'eesaanii hinba'aatan taanaan kutaan tokko qofti jijjiirama fiduu waan hindandeenyeef hunduu irratti hirmaachuun dirqama.
Keessumaa humna oomisha biyyaatii jedhamanii kan yaadaman dargaggoonni karoora biyyaa keessatti adda durummaan yoo hinhirmaanne biyyi karoora qabatte milkeessuun itti cima. Biyyoota hedduu keessatti baay'inni dargaggootaa kan caalu ta'uusaatiinis biyyoonni kunneen karoora baafatan keessatti dargaggoota adda durummaan hirmaachisu. Humna kana karoora biyyaarratti hirmaachisuu dhabuuniifi misooma biyyaattii irraa fayyadamoo akka ta'an taasisuu dhabuun ammoo biyya tokko gatii olaanaa kaffalchiisa.
Itoophiyaanis kanuma hubachuun waggoota muraasaa as dargaggootaaf xiyyeeffannaa kennuun hojjetaa jirti. Dargaggoonni caasaalee addaddaan gurmaa'anii shoora isaanii akka ba'ataniif akkasumas, misooma biyyattiirraa fayyadamoo akka ta'aaniifis haaloonni mijataniiruf. Kana keessattis yeroo yerootti rakkoolee mudatan irratti iftoomaan mari'achuun kallattii ka'uun hirmaannaan isaanii akka cimu ta'aa jira.
Dargaggoota caasaa addaddaa jalatti gurmaa'an keessaa Liigiin Dargaggoota ADWUI sadarkaa sadarkaan jiru tokko yoo ta'u, liigiin kunis dargaggoota miseensa ADWUI ta'an of jalatti qabachuun ijaarsa biyyaa keessatti ga'eesaa ba'ataa jira. Qaamuma liigichaa kan ta'e Liigiin Dargaggoota ADWUI magaalaa Finfinnees sochiilee siyaas-dinagdee biyyattii keessatti hirmaataa kan jiru yoo ta'u, wagga waggaadhaan walarguun raawwiifi karoora irratti mar'iachuun kallattii fuulduraa ni kaa'ata. Yaa'ii idilee arfaffaa dheengadda Finfinneerratti ta'aameenis miseensoonni liigiichaa ijaarsa biyyaa keessatti ga'ee qaban ba'aachuuf akka hojjetan ibsu.
Ministirri Muummee Haayilamaariyaam Dassaalany sirnicharratti argamuun haasawaa taasisaniin, tokkummaa, biyya, misoomaafi demokraasii cimaa ijaaruuf ga'een dargaggootaa cimaa ta'uu dubbataniiru.
Biyyattiin wayita ammaa dhimmoota addaddaa lama keessummeessaa jiraachuu eeranii, kunneenis milkaa'ina waggoota 25n darban argamaniifi fedhiin misoomaa lammiilee dabalaa dhufuu ta'uu ibsu. Kunimmoo hoji manee olaanaa mootummaa ta'uusaatiin dargaggoonnis keessatti hirmaachuu akka qaban himu. Rakkoolee bulchiinsa ADWUI keessatti argaman hiikuufis shoorri dargaggootaa olaanaa ta'uu eeranii, dargaggoonnis kana hubachuun ittigaafatamummaa isaanii akka ba'atan waamicha dhiheessu.
Durataa'aan Liigii Dargaggoota ADWUI Finfinnee Dargaggoo Xibabuu Baqqalaa gamasaatiin, rakkoo dargaggoota biyyattii furuufi kallattii haaromsa gadi fagoo ADWUI hojiirra oolchuuf liigichi waan irraa eegamu akka ba'atu dubbata.
Walumaagalatti, caasaa kam keessattiyyuu karoorri dargaggoota hinhammanneefi hinhirmaachisne fiixaan ba'uumsa waan hinqabneef sadarkaa hundarratti karoorri ba'uu adda durummaadhaan dargaggoota hirmaachisuu qaba. Dargaggoonnis qooda isaanii hubachuun hirmaannaasaanii cimsuu qabu.
Torban kana/This_Week 12402
Guyyaa mara/All_Days 1821822